Liin dhanaan (; ) waa midho ka mid ah khudaarta oo ka tirsan qoyska liinta. Liin dhanaantu waxay caan ku tahay dhadhankeeda dhanaanka ah iyo biyaha asiidha badan ee laga helo midhaheeda. Geedka liin dhanaantu waa mid waligiis cagaar ah oo ka dherer gaaban geedaha kale ee liinta. Sidoo kale liin dhanaanta waxay aad iskugu dhow yihiin xaga dhadhanka iyo walxaha ay ka samaysan tahay midhaha liin qarbooshta, waxayna kaliya ku kala duwan yihiin midabka cagaaran ee liin qarbooshta. Intaas waxaa dheer in liin dhanaantu ka dhanaan badan tahay liin qarbooshta. Isla markaana leedahay tiro badan oo nafaqada jidhku u baahan yahay ee fiitamiin-Sii.